Iitattoo ezimnyama ezimnyama: intsingiselo kunye nokuqokelelwa koyilo | Ukuzoba
Iitattoo ezimnyama ezimnyama: ingqokelela yoyilo kunye nenkcazo yentsingiselo yazo
Ngaba wakha wazibuza ukuba kutheni abantu befumana itattoo emnyama? Njengoko sele sithethile kwamanye amanqaku, kukho ii-roses tattoos zazo zonke iintlobo kwaye, ngokuxhomekeke kumbala weepalali, zinentsingiselo enye okanye enye. Inkqubo ye- ii-tattoo ze-rose ezimnyama ziya zithandwa ngakumbi kwaye kulo lonke eli nqaku siza kuchaza intsingiselo yalo ngokweenkcukacha ngelixa sihlanganisa uyilo olwahlukileyo.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, i Intsingiselo yeetatoo rose Iya kwahluka ngokuxhomekeka kumbala weentyatyambo zale ntyatyambo. Kwimeko yeentyatyambo ezimnyama, njengoko unokulindela, inophawu oluthile olumnyama kwaye inxulunyaniswa nezinto ezimbi. Kodwa, Kuthetha ntoni ubumnyama beetattoo ezimnyama? Kubantu abaninzi ifanekisela ukufa kunye neentlungu.
1 Intsingiselo yeetattoos ezimnyama
2 Iifoto zeTattoos eziMnyama eziMnyama
3 Iindawo zokufumana itattoo emnyama
4 Iindidi zeeTattoo ezimnyama
4.3 Iiroses ezimnyama nezibomvu
4.4 Iiroses ezimnyama zeGothic
4.5 Ngegama lomntu
Intsingiselo yeetattoos ezimnyama
Kungenxa yoko le nto inxenye enkulu yabo bantu bathatha isigqibo ngeroses emnyama ngexesha lokuvasa, kungenxa yokuba bafuna ukungafi kwesikhumba sakho kwimemori yothandekayo oshiye eli hlabathi. Kwelinye icala, kukho abo bacinga ukuba i-tattoo yerose emnyama inokufuzisela, ngokuchaseneyo nethemba. Kungenxa yokuba ezi roses zimnyama azikho ngokwenene.
Inalo necala elinxulunyaniswa nemvukelo kuba zahlukile, kwaye zime ngokwahlukileyo kuzo zonke ezinye. Kwezinye iinkcubeko, iiroses ezimnyama zifanekisela ukuphela kohambo olude nolunzima olunokuthi lutolikwe njengomphetho wenqanaba ebomini bethu okanye ukuphela komjikelo. Njengoko sibona, i ii-tattoos ezimnyama ezimnyama zinokuba neempawu zazo ezintle.
Iifoto zeTattoos eziMnyama eziMnyama
Iindawo zokufumana itattoo emnyama
Los iiTattoo ezimnyama bagqibelele kokubini amadoda nabasetyhini. Kodwa xa kuziwa ekucingeni ngendawo yokufumana itattoo yolu hlobo, kungcono ukucinga ngobungakanani bayo nokuba sifuna ukuba ibonwe yonke imihla okanye siyinxibe ngendlela enobulumko. Nangona kunjalo, zihlala zikhona iindawo zomzimba apho imfuno yokunxiba umvambo wolu hlobo inyuka. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zintoni?
Ngaphandle kwamathandabuzo, iingalo yenye yezona zinto zinkulu zitshatileyo sinazo xa kufikwa nxiba umvambo. Ke ngoko, ayimangalisi into yokuba kule ndawo kuqhutywa iitatoo ezimnyama. Ezinye zazo ziya kuba segxalabeni okanye egxalabeni, kodwa abanye abaninzi bakhetha umphambili njengenye yeendawo ezilungileyo zokufaka iiroses eziphakathi.
Inxalenye ephezulu yesandla ikwanemilinganiselo efanelekileyo yokufumana umvambo wolu hlobo. Kule meko, unokukhetha i-rose emnyama enye okanye enye enesiphelo sejiyometri, esihlala esinye sezona zimvo zintle ekufuneka uziqwalasele. Ukuba ucinga ukufumana Iiroses ezimnyama umvambo esandleni, emva koko unokukhutshwa yenye yezona zinokwenzeka, kunye nezithunzi ezimnyama kunye namagqabi athabatha isandla, njengoko sisitsho, kodwa ukufikelela kwindawo yethambo yesihlahla.
Sibonile iitatoo ezininzi zerose kodwa ngasemva. Apha ungangena kwakhona Uyilo olwahlukileyo kakhulu. Ezo zihamba zisuka egxalabeni kwaye zilula, kwabo bahlala kwindawo enkulu yolusu kwaye badityaniswa nezinye izimvo okanye iisimboli zobuqu. Olunye uluvo kukunxiba iiroses ezintathu ezinkulu ezisuka kwelinye igxalaba lisiya kwelinye, oko kukuthi, ngokuthe tyaba. Kodwa ukuba uyandithanda ukuba ndizobe umnqonqo, ii-tatoo ezimileyo zikwangumxholo. Unokukhetha iiroses ezininzi zolu hlobo, ukusuka kwinxalenye yentamo ukuya kwingingqi ye-lumbar.
Iindidi zeeTattoo ezimnyama
Iya kusoloko ixhomekeke kwincasa yomntu. Kodwa kuyinyani oko ii-tattoos ezimnyama ezimnyama emadodeni Zihlala zigxile kwiindawo ezifana nezandla, amadolo okanye imilenze, kunye neengalo. Ukongeza, zikhatshwa ziiroses ezininzi okanye enye ebetha ngakumbi kunye neendawo ezibhalwe umvambo nge-inki emnyama, ukuhamba nazo. Uyilo lwesitayile sejiyometri luchanekile kule meko, kodwa kukwakhona okunenyani ngamathontsi emvula athile phakathi kwamagqabi.
Ngamanye amaxesha sidibana iintyatyambo ezincinci, ngesiqu sawo nameva. Nangona kwelinye icala, inketho yokubona kuphela i-rose kunye neepalal tattooed yenye yeembono ezilungileyo. Indawo egxalabeni, kunye namagxa egxalaba abanye babamangalelwa kweli tyala. Kwindawo yesifuba okanye emathangeni zikwajongwa njengendawo enesidima kunye neendawo ezifanelekileyo zoyilo olunje.
Iiroses ezimnyama nezibomvu
Nangona enye yeentsingiselo zayo inxulunyaniswa nokufa, kufanele ukuba kukhankanywe ukuba ziyafana namandla kunye nomnqweno wokuthatha iindlela ezintsha. Nangona banokunxulumana nentlungu kunye nosizi ngokuswelekelwa ngumntu omthandayo, banokubonwa njenge uzinzo noxolo. Irose ebomvu ibonisa ukuzincama kodwa nothando okanye uthando. Ngaphandle kwamathandabuzo, banokudityaniswa kwii-tatoos ukunika ibhalansi kwintsingiselo yokugqibela. Ungazidibanisa iiroses esizikhankanyileyo, okanye, nayo yomibini imibala kwimbali enye.
Iiroses ezimnyama zeGothic
Iiroses ezimnyama, kule meko ziya kuhamba nge-inki emnyama zombini kwimiphetho yabo nasekugcwaliseni. Umbala omnyama uya kuba ngumbala ophambili we tattoo ngolu hlobo. Kodwa ewe, unokuhlala uhamba naye nabanye Iinkcukacha zokwenza ukuba ibe gothic ngakumbi. Olunye ukhakhayi, amagwababa, okanye ezinye iinkcukacha ezimnyama ziya kulungeleka ukunika umvambo wethu.
Ngaphandle kwamathandabuzo, kuxhomekeke kwintsingiselo esiyinika yona, sihlala sihlala yongeza ii-inishiyali okanye amagama yabantu bethu abathandekayo. Zombini iinxalenye zeepetali kunye nesiqu ziya kuba zilungele ukubhala elo gama. Unokukhetha iileta ezinesiphelo se-gothic kwaye uya kuba nesiphumo esingaphezulu kokumangalisayo.
Imifanekiso: IPinterest, googlechrome2016.ru, www.a2048.com
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitattoos zeentyatyambo kunye nezityalo » Iitattoo ezimnyama ezimnyama: ingqokelela yoyilo kunye nenkcazo yentsingiselo yazo
Iitattoos ezibonisa amandla kunye nokuphucula
Iitayile zemikhono engalweni: into ekufuneka uyazi